१२ महत्वपूर्ण गृह पृष्ठ तत्वहरू Martech Zone
१२ महत्वपूर्ण गृह पृष्ठ तत्वहरू
आइतवार, जनवरी २,, २०१। मंगलवार, मे 3, 2016 Douglas Karr
हबस्पट पक्कै एक इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति ड्राइभ गर्न सामग्री ड्राइभिंग मा अग्रणी हो, मैले एक कम्पनीले यति धेरै ह्वाइटपेपर, डेमो र ईबुकहरू राखेको कहिल्यै देखेको छैन। Hubspot अब एक प्रदान गर्दछ गृहपृष्ठको १२ महत्वपूर्ण तत्वहरूमा इन्फोग्राफिक.
होमपेजले धेरै टोपी लगाउनुपर्दछ र धेरै दर्शकहरू सेवा प्रदान गर्दछ जुन धेरै विभिन्न स्थानहरूबाट आउँदछन्। यो एक समर्पित अवतरण पृष्ठको विपरित हो, जहाँ एक विशेष च्यानलबाट ट्राफिकलाई विशिष्ट कार्य गर्न विशेष सन्देश दिनुपर्दछ। ल्यान्डि pages पृष्ठहरूमा उच्च रूपान्तरण दर छ किनकि तिनीहरू लक्षित छन् र आगन्तुकलाई सब भन्दा सान्दर्भिक छन्।
हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई इनबाउन्ड मार्केटि strate रणनीतिहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछौं ... र मैले भन्न चाहेको छु कि मलाई लाग्छ Hubspot यस इन्फोग्राफिकमा छाप छुटाईयो ... त्यहाँ केहि धेरै प्रमुख तत्वहरू र रणनीतिहरू यस इन्फोग्राफिकमा छुटेका छन्:
सम्पर्क जानकारी - कल-टु-एक्शन जानकारीको महत्त्वपूर्ण अंश हो, तर सबैजना डेमो वा थप संसाधनहरूमा क्लिक गर्न चाहँदैनन्। कहिलेकाँही तपाइँको ग्राहक खरिद गर्न तयार छ र केवल एक लाई चाहिन्छ फोन नम्बर or साइन अप फारम सुरु गर्न।
सामाजिक प्रतीकहरू - ग्राहकको पालनपोषणमा सामाजिक मिडियाको महत्त्वलाई हल्का ठोकिएन। कहिलेकाँही मानिसहरू तपाईंको साइटमा अवतरण गर्नेछन्, तर तिनीहरू अझै किन्नको लागि तयार छैनन्… ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई राम्रोसँग जान्नको लागि फेसबुक, Google+ वा ट्विटरमा पछ्याउनेछन्।
न्यूजलेटर सदस्यता - सायद कुनै पनि होमपेजको सबैभन्दा कम अनुमान गरिएको तत्व न्यूजलेटर सदस्यता हो। एक संभावना प्रदान गर्न को लागी उनीहरूको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्न र बारम्बार हुन छोईयो समाचार, प्रस्ताव र तपाईंको ब्रान्डको जानकारीको साथ अमूल्य छ। इ-मेल ठेगाना लिई बहुमूल्य छ - निश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाईंको गृहपृष्ठमा सरल र स्पष्ट छ।
म यो शब्द प्रयोग गरेर बहस गर्दछु विशेषताहरु # on मा पनि। यो धेरै र प्रयोगकर्ताहरू अधिक छन् भनेर प्रमाणित गरिएको छ सुविधाहरू भन्दा फाइदाहरूमा आकर्षित। तपाईको नयाँ फ्याled्गल रिपोर्टिंगको बारेमा कुराकानी महत्त्वपूर्ण छैन ... तर कार्यवाहक डेटा देखाउँदै जुन तपाईं प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कम्पनीले पैसा कमाउन सक्दछ!
अन्तमा, तपाइँको गृहपृष्ठ कुञ्जी शब्दहरूको लागि अप्टिमाइज हुनुपर्दछ जुन तपाइँको साइटलाई उचित ढ index्गले अनुक्रमणिका गर्दछ र तपाइँको साइट लोकप्रियतामा बढ्दै गएमा भेट्टाइन्छ भनेर निश्चित गर्दछ। SEO सधैं तपाईंको होमपेज डिजाइन र विकासमा भूमिका खेल्नुपर्छ।
टैग: गृहपृष्ठका लागि तत्वहरूहोमपेज डिजाइनहोमपेज तत्वहरूकसरीहबस्पट
नि: शुल्क बोलीले तपाईंको प्रतिष्ठालाई सुरक्षित गर्दैन
हामी शीर्ष १० सोशल मिडिया ब्लग हौं!
जनवरी 30, 2012 मा 4: 54 एएम
धेरै सत्य! र दुई दिन अघि गुगलले अवतरण पृष्ठको महत्त्वको बारेमा एक अद्यावधिक प्राप्त गर्यो। त्यसोभए यदि कसैले अफ-पृष्ठ अप्टिमाइजेसन अभियान चलाइरहेको छ भने, किवर्डहरूको सहि सूचि र उचित पृष्ठ हुनु महत्वपूर्ण छ जहाँ ती कीवर्डहरूले हामीलाई लैजान्छन्।
जनवरी १, २०१ 31 १२::2012 अपराह्न
तपाईको विशेषज्ञता साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद। म न्यूजलेटर सदस्यता तत्त्वमा तपाईंको कुरा दोस्रो गर्दछु! यसले मलाई चकित पार्दछ कि मँ सुन्न चाहन्छु कम्पनीहरूको सदस्यता लिनका लागि मैले कसरी खन्नु पर्छ।
मँ सहमत छु कि यस पृष्ठबाट हराइरहेको सब भन्दा ठूलो तत्व सामाजिक आईकनहरू हुन्। मलाई लाग्छ प्रत्येक पृष्ठमा सामाजिक मिडिया आइकनहरूको दुई सेट हुनुपर्दछ - एउटा कम्पनी, उत्पादन वा समग्र वेबसाइटको लागि र अर्को विशिष्ट पृष्ठ वा लेखको लागि जुन प्रयोगकर्ताले भ्रमण गरिरहनु भएको छ।